I-Harbor View Cottage
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLynn
Indlu entle yamaxesha amane ehleli eDouglas Harbour eGrand Lake, NB. I-cottage inamagumbi amabini okulala kunye namagumbi okuhlambela anedekhi enkulu ejikelezayo ekhokelela kwi-200 ft elunxwemeni lwesanti yabucala enedokhi. I-cottage ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-Wi-fi, iTV ene-Amazon fire Stick, i-BBQ kunye newasha kunye nesomisi.
Yiza uphumle elunxwemeni, okanye kwi-hammock. Pholisa ngokuqubha okanye intlanzi edokhini. Qeda imini ngomlilo omkhulu elunxwemeni.
Le ndlu inamagumbi okulala amabini alungiselelwe kakuhle, igumbi lokuhlambela eliphindwe kabini elinegumbi lokuhlambela eligcwele ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlala. Igumbi lokulala lesibini kunye negumbi lokuhlambela lifikeleleka ngegumbi lokulala eliphambili okanye ngedesika. I-cottage inendawo enkulu ejikelezayo ekhokelela kwizinyuko ezikuthatha ngqo kunxweme oluhle lwesanti. Kukho indawo yokucima umlilo kunye nedokhi enkulu kunye neqonga lokudada elisetyenziselwa iindwendwe.
4.98 ·Izimvo eziyi-196
Indlu ye-Harbourview ibekwe kwi-Harbourview Lane kude ne-Scotctown Rd., Qhuba ngqo ezantsi kwendlela. Indlu yaseHarbourview ikwizindlu zangasese ezintathu ezifikelelekayo ukusuka kwindlela. Indlu yethu yindlu yomsedare ngasekunene yahlala kwi-knoll encinci.
Isikhululo somlilo saseDouglas Harbour kunye neholo yoluntu zibekwe malunga nemizuzu emibini yokuqhuba, isidlo sakusasa se-pancake sihanjiswa rhoqo ngoMgqibelo ngeenyanga zasehlotyeni kwaye izifundo zeyoga ziyafumaneka phakathi evekini. I-Hunters General Store imalunga nemizuzu emibini ukuqhuba ngendlela echaseneyo, kukho ivenkile yotywala, i-ice cream kunye negrosari ekhoyo kunye necanteen ngexesha leenyanga zasehlotyeni. Isikhululo senqanawa eDouglas Harbour siqhutywa yiFredericton Yacht Club kwaye yindawo elungileyo yokwazisa isikhephe sakho.
Kuvulwe ikhefi entsha eDouglas Harbour ngaphaya kwebhari enkulu ebomvu ekwindlela yaseScotchtown ebizwa ngokuba yiBertie's Cafe, zivulwa mihla le ngeenyanga zasehlotyeni kwaye zivula ngoLwesine ukuya ngeCawe kwiinyanga zasebusika, zinika iisandwich zakusasa, isidlo sasemini, iilekese ezahlukeneyo, ikofu, iti kunye neziselo, kunye neepizza ezenziwe ngamaplanga ukusuka ngentsimbi yesi-4 ukuya kovala.
Ndihlala kumgama omfutshane kuphela ukuba ndiyafumaneka ukuba uncedo lwam luyafuneka